dhakhtaradii naagtu ku miyirsatey
Xiis, 8 Mar 2014(Alldhooftinle.com)
Dhakhaatiirta cisbitaalka St.Joseph ee magaalada Sycaruse ee gobolka New York ayaa u qaaday qolka qaliinka haweeney 41 jir ah oo la yiraahdo Colleen Burns, iyagoo ku doodaya inay dhimatay isla markaana ay saxiixday intay nooleyd in xubnaheeda loogu deeqo dadka u baahan, sidaa darteed ay ka saarayaan beerka, kelyaha iyo wadnahaba. Maadaama ay dhimatay oo aan loo baahnayn in la suuxiyo waxay diyaarsadeen qalabkii qaliinka oo keliya.
Laakiin markii ay shideen nalalkii ay qaliinka ugu tala galeen oo aad u iftiin badnaa ayay indhaha kala qaaday, waxayna weydiisay howsha ay qabanayaan oo ay dharka oo dhan uga saareen. dhakhaatiirtii waa is eegeen waana u suura geli weyday inay u jawaabaan. Qoyska naagtani ka dhalatay ayaa sheegay inay shaki badan ka qabeen geerida gabadhooda, isla markaana loo diidey in maydka gabadhoodu yaalo laba maalmood. Waxay kaloo sheegeen in cisbitaalku aanu waqti ku filan siin si ay gabadhooda u sagootiyaan.
Qoyskan ayaa markii ay Colleen soo toostay kula degdegay inay ka noqoto ogolaanshihii ay ogolaatay in xubnaheeda loogu deeqo dadka u baahan markay dhimato. Maanta wixii ka danbeeya qofna kula talin maayo inuu arintaa oo kale saxiixo waayo iyadoo aan la hubsan ayaa mindida lagugu boobayaa ayuu yiri qof ka tirsan qoyska gabadhaas.
Waxaase la yaab lahayd in cisbitaalka la ganaaxay lix kun oo doolar keliya, markii qoyska ay haweeneydani ka dhalatay diideen inay wax dacwad ah ku soo ogaan dhakhaatiirta iyo cisbitaalkaba. Arinkan ayaa sii kordhiyey shakigii dad badan oo Maraykan ahi ka qabeen adeegyada caafimaadka ee Maraykanka oo maalin walba wax lala yaabo laga sheegayo. Haweeneydan ka badbaaday mindiyaha lagu qalan lahaa ayaa ugu danbeyntii is dishey mudo ka dib markii ay cisbitaalka kasoo baxday. Qoyskeeda waxay sheegeen in xanuun xaga maskaxda kaga dhacay sidaa darteedna ay isu dishay.